पूर्वराजदूत झा हत्या : प्रहरीको लेन्समा फेरि सानुकान्छा
नारायण अधिकारी शुक्रबार, साउन ३०, २०७७, ०२:२५
काठमाडौं– प्रहरीकै भनाइ सापट लिएर भन्ने हो भने पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या रहस्यमय अपराधमध्ये पनि अझै रहस्यमय घटना हो। अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका प्रहरी अधिकृत र उनको समूहले तीन महिनासम्म अनुसन्धान गर्दा पनि हत्याको घटनाको गुत्थी पत्ता लगाउन सकेको छैन।
यद्यपि प्रहरीले घटनाबारे उपलब्ध सूचनाहरुको विश्लेषण गर्दै धरौटीमा छुटेका एक व्यक्तिलाई पुनः अनुसन्धानको लेन्सभित्र पार्दैछ। ती व्यक्ति हुन् फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत झाको घरमा भान्सेको काम गर्ने सानुकान्छा तामाङ।
‘ल सानुकान्छाले नै हत्या गरे रे। तर हत्याको पछाडिको मोटिभ चाहिँ के त? हत्या गरेर केही लुटिएको समेत छैन। हत्याको मोटिभ नै पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा यही नै हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘तर उनीमाथिको संका ९० प्रतिशत छ । प्रमाण छैन।’
यदि सानुकान्छाले नै हत्या गरेका भए किन गरे?, हत्याको कारण के? हत्या पछि किन उनले झाको साथमा रहेको रकम समेत लगेनन्? जस्ता कुराको उत्तर र प्रष्ट प्रमाण जुटाउन नसक्दा प्रहरी अहिले हत्यारा यही हो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन।